Nhọrọ kachasị mma nke akwụkwọ akụkọ omimi
Nyocha akwụkwọ omimi
Ihe ịrịba ama nke Cross nke Glenn Cooper
Ọ dịla anya kemgbe m nwetara akụkọ gbasara mkparị Ndị Kraịst nke na-arụtụ aka na ike karịrị nke mmadụ mgbe niile dịka ihe ncheta nke ndị Chineke họpụtara. Yabụ na ọ bara uru ịkọwapụta atụmatụ a na taa chọtara ikpe ọhụrụ nke ịdị nsọ nke emelitere, nke nhọrọ ...
3 akwụkwọ kacha mma nke Julián Sánchez dere
Inwe ike ịchọpụta ihe na -eme n'okpuru mkpanaka n'egwuregwu basketball chọrọ itinye uche na nka dị mkpa iji chọpụta aka ahụ na -akụ ogwe aka onye iro kama ịkụ bọl. Ma ọ bụ nkwụnye ahụ na mgbada mgbada nke bọl nke na -emebi ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Agatha Christie
Enwere uche nwere ihe ùgwù nke nwere ike ime atụmatụ otu puku na otu na ihe omimi ha na -adabaghị. Ọ bụ enweghị mgbagha ịtụrụ aka Agatha Christie dị ka eze nwanyị nke ụdị nchọpụta, nke mechara banye n'akwụkwọ akụkọ mpụ, ndị na-akpali akpali na ndị ọzọ. Ọ bụ naanị ya, na-enweghị nnukwu enyemaka nke mmadụ niile ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Carlos Ruiz Zafón dere
Laa azụ na 2020, otu n'ime ndị ode akwụkwọ kachasị ukwuu na ụdị aha hapụrụ anyị. Onye edemede nke kwenyesiri ike na ndị nkatọ na onye nwetara aha ama ama ama atụgharịrị ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa kacha mma maka akwụkwọ akụkọ ya niile. Eleghi anya onye odee Spanish kacha agụ mgbe Cervantes gasịrị, ikekwe site na ikike nke…
5 kacha mma akwụkwọ nke Javier Sierra
Kwuo banyere Javier Sierra Ọ pụtara ịbanye n'ụdị ihe na-ere ahịa kacha mma na Spain. Onye edemede a sitere na Teruel aghọwo onye na-ere akwụkwọ kachasị mma na Spain na n'ụwa nile. akwụkwọ niile nke Javier Sierra ha na-enye ụgwọ ọrụ nke nnukwu ihe omimi ahụ, na-adọrọ mmasị…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji12 Ọzọ →